Ny 90% tamin’ny mpitarika ny HVM tao anatin’ny fitantanana daholo ka nahoana moa no handeha hirodorodo ao anatin’ny fanjakana vao mijoro eo, kanefa nitondra nandritra ny 5 taona. Tsy milaza hoe rehefa hivory izahay dia handeha hanao izay tsy hampandroso ny firenena, fa ao anatin’ny fitoniana sy ny fijerena ny ho avin’ny antoko no antony, hoy i Rivo Rakotovao. Tampoka ho an’ny sasany fa tsy ho anay satria efa fotoana nifanomezana io. Marina fa ny tanjaky ny antoko dia mety jerena any amin’ny isan’ny olom-boafidy, fa tao anatin’ny telo volana naharesy ny kandidanay Hery Rajaonarimampianina ve izahay no handeha hihazakazaka sahady kanefa efa niarahanareo nahita hoe: olona tao aminay ihany no lasa kandida filoha, nisy nivadika tatsy sy taroa,… Naleonay aloha nijery sy namela malalaka ny rehetra nanomboka tamin’ny fifidianana filoha fihodinana faharoa. Moramora kokoa izy amin’izao hoe: hay ve ranona tahaka izao, hoy hatrany Atoa Rivo Rakotovao. Raha nanontanian’ny mpanao gazety amin’ny mety ho toeran’ny HVM na hanohitra na tsia Atoa Rivo Rakotoavao, dia nambarany fa raha nitovy ny hevitra tsy nandatsaka olona izy ireo. Izay no manahirana hoe: misy ny olona avy milatsaka avy etsy dia milatsaka amin’ny anaran’ny aroa, fa izahay tsy manao izany, hoy izy.